Wholesale MA-202U (Macroporous Strong-Base Anion Exchange Resin) Mpanamboatra sy mpamatsy | Dongli
Ny uranium dia radionuclide, mety hitranga amin'ny rano anaty kokoa noho ny rano ambonin'ny rano, ary matetika
hita miaraka amin'ny radium. Ny fanalefahana ny rano misy olana dia mety mitaky fitsaboana amin'ny fanesorana uranium sy radium.
Ny uranium dia misy amin'ny rano matetika satria ny uranyl ion, UO22 +, niforona tamin'ny fisian'ny oxygen. Amin'ny pH ambonin'ny enina dia misy uranium ao anaty rano azo sotroina, indrindra fa ny kompleks karbonat uranyl. Ity endriky ny uranium ity dia manana fifandraisana lehibe amin'ny resins anion fototra mahery.
Ny filaharam-pitoviana amin'ny resona anion fototra mafy ho an'ny ion iraisana amin'ny rano fisotro dia mampiseho uranium eo an-tampon'ny lisitra:
Toetra mampiavaka ny vatana sy ny simika
Rafitra Matrix Polymer Styrene ampifandraisina amin'ny DVB
Bika aman'endrika fisehoana Vakana vita amin'ny opaque
Manisa Bead manontolo 95% min.
Vondrona miasa CN2-N + = (CH3)3)
Ionic Form, toy ny nalefa SO4
Total Capacity Exchange, SO4- endrika, lena, volumetrika 1.10 eq / l min.
Fitanana ny hamandoana, CL- teny 50-60%
0.71-1,60 mm> 95%
Mamontsina CL-→ OH- 10% max
HERY Tsy latsaky ny 95%
Mba hamerenana amin'ny laoniny ny karbaona uranyl dia zava-dehibe ny hakitroky ny mpamerina ao amin'ny farafara resin ho avo lenta mba hanodinana na hampihenana ny toe-piainana akaiky amin'ny ambaratonga azo ekena ary hampiasana fotoana fanavaozana sy fifandraisana ampy. Ny sôlida klôroida no mpamorona fahita matetika.
Ny fifantohana mihoatra ny 10% NaCl, amin'ny ambaratonga miverina 14 ka hatramin'ny 15 lbs. isaky ny cu. ft. dia ampy hiantohana tsara kokoa noho ny fanesorana uranium 90% amin'ny alàlan'ny tsingerin'ny fandidiana. Ity fatra ity dia hahalasa farafaharatsiny 50% amin'ireo uranium voaangona avy amin'ny resina. Ny famoahana dia hijanona ambany amin'ny alàlan'ny tsingerin'ny serivisy na dia tsy misy famerenana amin'ny laoniny tanteraka aza satria voafantina be dia be mandritra ny tsingerin'ny serivisy. Ny tondra-drano dia tena tsy misy ho an'ny famerenana amin'ny laoniny 15 lbs. ny sodium klorida isaky ny cu. ft. amin'ny fifantohana 10% na avo kokoa miaraka amin'ny fotoana farafahakeliny farafahakeliny 10 minitra mandritra ny fanavaozana.
Ny fahombiazan'ny tsiranoka samihafa amin'ny sira:
Haavo Regenerant - Manodidina ny 22 lbs. isaky ny cu. ft. an'ny karazana 1 Resin Gel Anion.
Nesorina ny uranium
Fiarovana sy fitantanana
Ny fako regenerant avy amin'ny rafitra fanesorana uranium dia endrika mifangaro amin'ny uranium ary tsy maintsy ariana araka ny tokony ho izy. Ho an'ny tompon-trano, ny vahaolana lany dia matetika esorina amin'ny fomba famoahana ny brine softener, ny habetsaky ny uranium tonga amin'ny teboka fanariana dia mitovy na tsia ny singa fanesorana uranium na tsia. Na izany aza, ilaina ny manamarina ny fitsipika momba ny toerana iray nomena.
Ny fanariana resina feno uranium dia tsy maintsy jerena ny habetsaky ny radioactivity misy ao amin'ny media.
Ny departemantan'ny fitaterana amerikana dia mifehy ny fitaterana sy ny fikirakirana ireo fako radioaktifa ambany. Tsy dia misy poizina ny uranium ary manana ambaratonga avo kokoa azo avela noho ny radium. Ny haavon'ny uranium dia voalaza fa 2.000 picoCury isaky ny grama amin'ny media.
Ny famoahana mialoha dia azo isaina amin'ny mpamatsy resin ny fifanakalozana ion anao. Ny rindranasa indray mandeha dia mety hahatratra ny volan'ny famoahana teorika lehibe kokoa noho ny volan'ny fandriana 100,000 (BV), raha toa ka manodidina ny 40.000 ka hatramin'ny 50.000 BV ny tsingerin'ny serivisy azo averina amin'ny laoniny. Na dia manintona aza ny mihazakazaka ny resina raha mbola azo atao amin'ny fampiharana indray mandeha dia tsy maintsy jerena ny habetsaky ny uranium voaangona sy ny olana fanariana manaraka.
Teo aloha: Resin'ny Adsorptive Macroporous
Manaraka: MA-407 Arsenic Selectivity Resin